MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 26 October 2008
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 1.11.080COMMENTS
Labels: MASOEYEIN MONASTERY, NARGIS CYCLONE, SITAGU SAYADAW
ဧရာဝတီ အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း မှ ဖတ်စဖွယ် ဆောင်းပါးများ
> မျိုးဆက်သစ် အရင်းအမြစ်များ မဆုံးရှုံးစေချင် (စိုးစိုးဝင်းလတ်)
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရှိတော့လျှင် (ကျော်စွာမိုး)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 1.11.083COMMENTS
AUNG SAN POEM
ငါ့ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီနေ၏ ညွတ်ကားမညွတ်
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 31.10.080COMMENTS
Labels: GENERAL AUNG SAN, OTHERS' POEMS
DON'T FORGET OUR BLOODY SEPTEMBER !
ပဲခူးမြို့  ကြခတ်ဝိုင်း ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကို
စစ်အဆိုးရမှ မဟာဘုံကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူ
(၂၇၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၈ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ)
ကြခတ်ဝိုင်းဆရာတော်အပေါ် အကြည်ညိုပျက်ပြီး ကျောင်းတိုက်က
သံဃာများကို ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းများကို မြို့ ခံများ မလုပ်ကြတော့
( ၉၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၇ )
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 29.10.080COMMENTS
A Good Song Of Myo Gyi (IRON CROSS, BURMA)
Vocal: Myo Gyi
Lyric: Maung Maung Zaw Latt
Band : Iron Cross, Burma
(Dedicated to State Peace and Development Council of Myanmar, Military Junta!)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 28.10.080COMMENTS
INSIDE BURMA NOW-A-DAY (3)
“အနာဂတ်မဲ့ရရှာသော ဗမာပြည်က ကလေးငယ်များ”
တောင်းရမ်းစားသောက်ရတဲ့ ကလေး၊ စားပွဲထိုးလုပ်ရတဲ့ ကလေး၊ ဂျာနယ်ရောင်းရတဲ့ ကလေး၊ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရတဲ့ ကလေး၊ အိမ်အကူလုပ်ရတဲ့ ကလေး၊ စစ်သားလုပ်ရတဲ့ ကလေး...
အမျိုးထိတိုင်း မချိအောင်နာတတ်မယ်ဆိုရင်... ။
(စစ်အဆိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အလိုတော်ရိတွေရဲ့ ရင်သွေးများ ဘ၀တွေနဲ့ကတော့ ကလေးချင်း အတူတူတောင် ကွာချင်တိုင်းကွာနေရပြီလေ)
ဗမာပြည်မြို့ကြီးတစ်မြို့မှ ဈေးတန်းတစ်ခု မြင်ကွင်း
ကျွဲလိုနွားလို ရုန်းရတယ်...ဆိုတဲ့ စကား
ဗမာပြည်တောင်သူ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားများအတွက်သက်သက် ထားခဲ့လေရော့သလား
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 26.10.080COMMENTS